Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » IJamani ibeka irekhodi entsha yeZithuthi zoMbane
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IJamani ibeka irekhodi entsha yeZithuthi zoMbane.
Ipesenti yezithuthi zoMbane phakathi kweemoto zaseJamani ezisanda kubhaliswa ziphezulu kakhulu, zichasa ukuphazamiseka kwangoku kwishishini lemoto.
Ngenyanga ka-Oktobha, okwesihlandlo sokuqala, iimoto zombane zazibalelwa kuma-30.4 ekhulwini okubhaliswa kwezithuthi ezintsha eJamani.
Imida yenzuzo yezithuthi zombane okwangoku iphezulu kakhulu, kuba urhulumente waseJamani uxhasa ukuthengwa kwee-EVs ukuya kuthi ga kwi-EUR 6000.
Abathengisi banikezela ngesaphulelo se-EUR 3000, okwenza abathengi bacinge ukuba ngoku lixesha elifanelekileyo lokuthenga imoto.
Ngelixa ukuthengiswa kwezithuthi eziqhelekileyo kuye kwabandezeleka phantsi kokunqongophala kobonelelo kunye namaxesha amade okuhanjiswa, ii-EVs ziphuma kubathengisi eJamani. I Umbutho waseJamani woShishino lweemoto (VDA) uthi kwinyanga ka-Oktobha, okokuqala, zithuthi Ibalelwa kuma-30.4 epesenti yobhaliso lwezithuthi ezitsha. Loo nto ibangelwa kukuguquguquka kwangoku kweemarike.
“Ingcaciso ilula,” utshilo uStefan Di Bitonto oyingcali yeemoto eJamani. “Abenzi beemoto bathatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwezithuthi abazabela iinxalenye ezifana nee-semiconductors. Imida yenzuzo ye zithuthi ngoku ziphezulu kakhulu. Kungenxa yokuba urhulumente waseJamani uxhasa ukuthengwa kwee-EVs ukuya kuthi ga kwi-EUR 6000. Ukongeza abathengisi banikezela ngesaphulelo se-EUR 3000, nto leyo eyenza abathengi bacinge ukuba ngoku lixesha elifanelekileyo lokuthenga imoto. Ngoko kunengqiqo ukubeka i-semiconductors kwii-EVs. Wonke umntu macala onke wenza ingeniso.”
Amanani ayayingqina loo nto. Iimoto ezingama-178,700 zizonke zabhaliswa eJamani ngo-Oktobha, ukuhla kwenyanga ngama-35 ekhulwini. Kwakukho i-54,400 entsha yokubhaliswa kwe-EV, ukwanda kwe-13 ekhulwini. Kwaye ukubhaliswa kweemoto eziqhutywa ngebhetri (BEVs) ngokuchaseneyo nee-plug-in hybrids (PHEVs) kunyuke ngeepesenti ezingama-32 ngenyanga. Yinto ebonakala ngathi iya kuqhubeka kwixesha elifutshane.
"Imizekelo yaseChina neNorway, kunye ne-US ukuya kuthi ga kuTesla, iphakamisa ukuba ukuba ii-premiums zokuthenga zikarhulumente ziqhubeka kule nqanaba, amanani okuthengisa kunye nokubhaliswa kwee-EVs aya kuchuma," kusho uDi Bitonto. "Le nxalenye yentengiso yeemoto iyaxhathisa ukubonelela ngokunqongophala kuba abenzi beemoto baya kuqhubeka nokusebenzisa iindawo abanazo ukwakha ezona zithuthi zinengeniso."
Amanani enyanga afika phakathi kogqabhuko-dubulo oluqhelekileyo lokuthandwa kwii-EVs eJamani. Imoto yombane ukubhaliswa ngaphezu kokuphindwe kathathu, ukusuka kwi-63,281 ukuya kwi-194,163, ukusuka kwi-2019 ukuya kwi-2020, ngokwe-arhente karhulumente waseJamani i-KBA. Kwaye i-115,296 EVs yabhaliswa ukusuka ngoJanuwari ukuya kuMeyi walo nyaka kuphela.
"Kukwacacile ukuba ukwamkelwa kwee-EVs eJamani kuyakhula," uDi Bitonto wongezelela. “Yindlela eyomelezana. Abantu bathenga ii-EVs ngoku kuba kuyinzuzo ukwenza oko, kodwa ukonyuka kwenani lee-EV ezindleleni ngokuqinisekileyo kuya kukhulisa ukuthandwa kwazo nokuba kunqongophele ntoni na. ”